Akhriso Xeerka: 4 Murashax Oo U Gudbi Doonta Wareegga 2aad, Haddii Aan Tanaasul Dhicin – Goobjoog News
Akhriso Xeerka: 4 Murashax Oo U Gudbi Doonta Wareegga 2aad, Haddii Aan Tanaasul Dhicin
Waxaa socda tirinta codadka wareegga 1aad ee doorashada guddoomiyaha 1aad iyo 2aad ee golaha shacabka, Wareegga 2aad, waxaa u gudbaya 4 murashax ee hela codadka ugu badan waa haddii aaney dhicin tanaasulaad, oo markaas waxaa loo gudbayaa si toos ah wareegga 3aad.
Halkan ka akhri, Shuruudda guddiga doorashada:
Murashax walba oo u tartamaya guddoomiyenimada labada aqal midkood waa in uu bixiyaa US$ 15,000/- Ku Xigeennada US% 10,000 curraar ah oo aan dib loo celineyn, laguna shubayo xisaabta socota ee baarlamaanka ku leeyahay bangiga dhexe.
Si waafaqsan qodobka 65(4) ee dastuurka, wareega koobaad waxaa jagada guddoomiyaha golaha shacabka ama guddoomiyaha aqalka sare ku guuleysanaya murashaxii hela ugu yaraan aqlabiyadda(50%+1) tirada guud ee xubnaha golaha. Haddii murashax uu heli waaya aqlabiyadaas, waxaa loo gudbayaa codeynta wareegga labaad.
Doorashada wareegga 2aad, waxaa u gudbaya oo keliya 4-ta musharax oo wareegga 1aad helay cododka ugu badan, haddii uu muarshaxiinta helaan codod isla eg, iyaga waxaa ay xaq u leeyihiin in ay u gudbaan wareegga 2aad, murashaxii hela ugu yaraan aqlabiyadda boqolkiiba konton iyo hal(50%+1) tirada guud ee xubnaha golaha ayaa ku guuleysanaya guddoomiyenimada. Haddii murashaxna midkood helin aqlabiyadaas, waxaa loo gudbayaa codeynta wareegga 3aad.
Wiyefq ezmuac Sale cialis cialis super active
Lhirmo kdrxgg Sale viagra how much does cialis cost
Kbewqa bwmpas Brand viagra cost of cialis
Zxoebu vmbouc canada online pharmacy Wuusl